သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် ရေကြီးပြီး အပျက်အစီး အဆုံးအရှုံးများလှတဲ့ ပခုက္ကူ၊ ဆင်ဖြူကျွန်းနဲ့ ဆိပ်ဖြူ ဒေသတဝိုက်က အမှန်တကယ် အကူအညီလိုနေတဲ့ နေရာတွေအတွက် အလှူလေးတခုလုပ်ကြဖို့ကို မျက်နှာစာအုပ်ပေါ်မှာရှိတဲ့ ဘလော့ဂါများ စကားဝိုင်း (AaB) မှာ စကားပြောဖြစ်ကြရင်းက အဲဒီစိတ်ကူးလေးကို လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖေါ်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်…။
အဲဒီအတွက် အလှူငွေတွေကို အောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက်နေ့ကနေ စပြီး ကောက်ခံခဲ့ပါတယ်။ စင်္ကာပူက အလှူရှင်တွေကတော့ Bank to Bank အလွယ်တကူ ငွေလွှဲနိုင်ခဲ့ကြပြီး အခြားနိုင်ငံတွေက အလှူရှင်တွေကတော့ သက်ဆိုင်ရာ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများကနေ တဆင့်သော်လည်းကောင်း၊ Western Union နဲ့ PayPal Account တွေက တဆင့်သော်လည်းကောင်း အလှူငွေတွေကို စေတနာ သဒ္ဓါတရား ထက်သန်စွာနဲ့ ပေးပို့လှူဒါန်းခဲ့ကြပါတယ်။
အောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက်နေ့ နေ့လည် ၁၂ နာရီမှာ အလှူငွေကောက်ခံမှုကို ရပ်နားပြီး စာရင်းပိတ်ပါမယ်လို့ ကြေငြာခဲ့ပေမယ့် တကယ်တမ်းမှာ အလှူငွေတွေက ဆက်တိုက် ဝင်လာနေဆဲဖြစ်တာကြောင့် အဲဒီနေ့က ည ၁၁ နာရီကျော်မှ စာရင်း ပိတ်ခဲ့ရပါတယ်။
စာရင်းပိတ်အပြီးမှာ လက်ခံရရှိတဲ့ စုစုပေါင်း အလှူငွေက စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၅၁၅၀.၂၁ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို လက်ခံရရှိတဲ့ အလှူငွေတွေကို မနေ့က နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းမှာ စင်္ကာပူ တဒေါ်လာကို မြန်မာကျပ်ငွေ ၆၃၅ ကျပ်နှုန်းနဲ့ ဆရာမ မြသွေးနီဆီကို ပို့လိုက်ပါတယ်။ အလှူငွေ စုစုပေါင်း ၃၃ သိန်းအတိ ဖြစ်သွားအောင် သက်ဝေနဲ့ ချစ်ကြည်အေးက ထပ်ဖြည့်ပြီး လှူလိုက်ပါတယ်။ မနေ့ညနေက ဆရာမ မြသွေးနီက အလှူငွေတွေကို ကောင်းမွန်စွာ လက်ခံရရှိတဲ့အကြောင်း အီးမေးလ်ပို့လာပါတယ်။
ပခုက္ကူမြို့နယ် အပါအဝင် အမှန်တကယ် လိုအပ်နေတဲ့ နေရာတွေအတွက် ဆရာမ မြသွေးနီ လှူဒါန်းတဲ့ အလှူငွေ ကျပ် ၅ သောင်း အပါအဝင် စုစုပေါင်း အလှူငွေ ၃၃ သိန်း ၅ သောင်းတိတိကို ဆရာအော်ပီကျယ်ရဲ့ စီစဉ်ညွှန်ကြားမှုနဲ့အတူ ရနံ့သစ် မဂ္ဂဇင်းက တာဝန်ခံ အယ်ဒီတာ ဆရာပြည်သွေးနိုင်ထံမှာ ဒီနေ့ နိုဝင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့ ညနေ ၃ နာရီအချိန်က သွားရောက် လှူဒါန်းပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအလှူမှာ ပါဝင်လှူဒါန်းကြတဲ့ အလှူရှင်တွေနဲ့ အလှူငွေ စာရင်း အပြည့်အစုံက ဒီမှာပါ။
1. Oversea Burmese Youth Group - $S 200.00
2. ဦးထွန်းထွန်းဇော် + ဒေါ်နုနုဝင်း - $S 60.00
3. No name - $S10.00
4. No name - $S10.00
5. ဦးမြင့်ဦး မိသားစု -S$30.00
7. ကိုစိုးခိုင် + မဝင်းမင်းသန်း - S$ 100.00
8. Trilobite Myanmar နှင့် ဇနီး - S$10.00
9. ဆွေဆွေ - S$ 50.00
10. ကိုဝင်းထွန်းနိုင် + မဟန်အေးစိုး - S$ 30.00
11. Creative Ant Team - S$100.00
12. Everlearner - S$ 30.00
13. Theingi Myint - S$ 50.00
14. ကိုသက် မိသားစု - S$ 50.00
15. Serene Cheong - S$ 10.00
16. လွင်ထူးကို + ခင်စန္ဒာကို - S$ 40.00
17. ဦးလှမြင့် + ဒေါ်ညိုညို - S$ 20.00
18. ကိုဇော်ဝင်းထွတ် + မနှင်းယုယုဝင်း သမီး အေးချမ်းပွင့်ဖြူ - S$ 50.00
19. ဖြူမေဇင် - S$ 33.00
20. ကိုတင်မောင်အေး - S$ 10.00
21. ကိုမောင်မောင်တာ + မမေသူဆွေ - S$ 30.00
22. TOI's friend - S$ 50.00
23. Donation fr Reader - S$ 10.00
24. သန့်ဆွေ - S$ 50.00
25. ZYLKPS - S$ 50.00
26. ကိုပြည်သင်း + မမြနှင်းအေး - S$ 50.00
27. Pink Lover - S$ 110.00
28. Erna (Indonesia) - S$ 150.00
29. မျိုးမြင့်ဟန် - S$ 20.00
30. အောင်ကိုဝင်း - S$ 20.00
31. အောင်မျိုး - S$ 20.00
32. အောင်သူကျော် - S$ 20.00
33. မြတ်ကိုနောင် - S$ 20.00
34. ဆုမွန်သွင် - S$ 20.00
35. ချမ်းငြိမ်းအေး - S$ 20.00
36. ဥမ္မာထွေး - S$ 50.00
37. မိုးစန္ဒာမြင့် - S$ 50.00
38. TDW - S$ 50.00
39. သန်းဇော်မျိုး - S$ 10.00
40. ခရေဖြူ - S$ 30.00
41. အေးအေးစန်း - S$ 50.00
42. ကိုဝဏ္ဏဝင်း + မမေဇော်ဦး သား ညီညာဇော် - S$ 50.00
43. စောစုမြတ် - S$ 30.00
44. လှမျိုးအောင် - S$ 20.00
45. ကိုစိုးဝင်း + မဖြူ - S$ 50.00
46. မကျော့ကျော့ရွှေ - S$ 100.00
47. Mya TheinGi - S$ 20.00
48. ဦးဇော်မြင့် + ဒေါ်စန်းစန်းကြည် - S$ 30.00
49. ခိုင်စုလတ် - S$50.00
50. ချစ်ကြည်အေး (http://www.chitkyiaye.com/) - S$73.40
51. မေဇင်အေး (http://monethu.blogspot.com) -S$30.00
52. Noble Moe (www.noblemoe.blogspot.com) -S$50.00
53. သက်ဝေ (http://www.thet-wai-blog.blogspot.com/) - S$73.40
54. ကိုလူသစ် (http://luthit.blogspot.com/) - S$50.00
55. အမေ့သား (http://amaythar1976.blogspot.com/) - S$50.00
56. ညိုလေးနေ (http://nyolaynay.blogspot.com/) -S$30.00
57. အန်တီတင့် (http://www.auntytint21183.net/) - S$100.00
58. မှုံနံ့သာ (http://nyeinsuaye.blogspot.com/) -S$30.00
59. TZA (http://www.degolar.info/) - $S 30.00
60. TOI (http://turnonideas.blogspot.com/) - $S 50.00
61. ပေါက် (http://ah-pauk.blogspot.com/) - S$ 50.00
62. အင်ကြင်းသန့် (http://ingjinthant.blogspot.com/) - S$ 30.00
63. ပီတိ (http://www.pti31.com/) - S$ 50.00
64. မယ်ကိုး (http://www.maecoe.net/) - S$50.00
65. July Dream (http://july-dream.blogspot.com/) - S$ 150.00
66. ကိုအောင်(ပျူ) မိသားစု (http://www.pyustate.com/) - S$ 50.00
67. ကိုဇော်သက်အောင် (http://www.phoonuthit.com/) - S$ 50.00
68. လင်းလင်းဇော် (http://www.mymps.blogspot.com/) - S$ 50.00
69. ကိုတင်မောင်ဌေး + မနွေးနေခြည် (http://www.nwaynaychi.blogspot.com/) - S$ 50.00
70. Vista Aung (http://vistazplanet.blogspot.com/) - S$ 40.00
71. ညီရဲသစ် (www.nyiyethit.blogspot.com) - S$ 30.00
72. ကိုဧရာ + မသီတာ သား ရေချမ်း နှင့် ရေစင် (http://sonata-cantata.blogspot.com/) - S$ 50.00
73. မောင်သန့် (www.mgthant.me) နှင့် သူငယ်ချင်း - S$ 50.00
74. ကိုဌေးအောင် (http://luula18.blogspot.com/) - S$ 680.72
75. ဖြိုးဖြိုးလှိုင် (http://www.phyophyohlaing.com) - S$ 86.48
76. နန်းဝါဝါမောင် (http://warwarkhaingmin.blogspot.com/) - S$ 40.00
77. ကောင်းထက်မြင့် (http://khetyintyint.wordpress.com/) – S$ 20.00
78. တေးမွန် (http://ahnai.blogspot.com/) – S$ 100.00
79. ချိုကျ (http://xdeadxromanticx.blogspot.com) - S$ 30.00
80. ဖိုးသင်္ကြန် (www.phothagyan.blogspot.com ) - S$ - 50.00
81. Libra Tun (http://libratun.blogspot.com/) - S$ 20.00
82. ကိုဂျေ (http://xdeadxromanticx.blogspot.com) - S$ 20.00
83. ဘိုဘို နှင့် ဖိုးစိန် (http://phoesein.blogspot.com/ & http://www.mogokthar.com/) - S$ 50.00
84. ပိုးပိုး (http://33poepoe.blogspot.com/) - S$ 30.00
85. နော်ဖော (http://rose-sharon.blogspot.com/) - S$400.00
86. ကေသွယ် (http://kthwe.blogspot.com/) - S$ 50.00
87. KMSL + KOM (http://khinoomay77.blogspot.com) - S$ 30.00
88. အိန္ဒြာ (http://eaindrar.blogspot.com/) - S$ 50.00
89. မိုးပန်းချီ (http://moepanchi.blogspot.com/) - S$ 20.00
90. မေသိမ့်သိမ့်ကျော် (http://www.maytheint2kyaw.com/) - S$ 80.00
91. ကိုခင်မောင်ဦး + မသန္တာလွင် (http://thandarlwin.blogspot.com/) - S$ 30.00
92. မြသွေးနီ (http://www.myathwayni.com/) - ကျပ် ၅ သောင်း
စုစုပေါင်း စကာင်္ပူဒေါ်လာ ၅၁၉၇.၀၀ နဲ့ မြန်မာကျပ်ငွေ ၅ သောင်း ဖြစ်ပါတယ်…။
AaB (All about Bloggers) ဆိုတဲ့ ဘလော့ဂါများ စကားဝိုင်းလေးတခု ဖြစ်လာအောင် မျက်နှာစာအုပ်မှာ စပြီး အကြံပြုခဲ့တဲ့ ကိုအောင် (ပျူနိုင်ငံ)၊ အဲဒီ ဘလော့ဂါတွေ စကားဝိုင်းမှာ တို့တွေ စုပေါင်းအလှူလေးတခုလောက် လုပ်ကြရင် ကောင်းမှာ… လို့ စကားစခဲ့တဲ့ ဘော်ဒါကြီး ကလူသစ်၊ ဒါဆိုရင် ပခုက္ကူရေဘေးမှာ သွားလှူကြရအောင်လေ လို့ ပြောဆိုလှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့ ကိုဂျူလိုင်၊ Personal Bank Account ကို အသုံးပြုခွင့်ပေးပြီး ဝင်သမျှ အလှူငွေစာရင်းတွေကို စိတ်ရှည်လက်ရှည် update လုပ်ပေး၊ ဆရာမ မြသွေးနီ နဲ့ ဆရာ အော်ပီကျယ်တို့ကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ဆက်သွယ်ပြီး အလှူဖြစ်မြောက် အောင်မြင်အောင် စနစ်တကျ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်း ချစ်ကြည်၊ အဖွဲ့ရဲ့ လိုဂိုလေးကို အမနှစ်ယောက် ပြင်ချင်သမျှ အကြိမ်ကြိမ် ပြန်ပြင်ပေးခဲ့တဲ့ မောင်လေး ဆောင်းချမ်းမိုး အပါအဝင်… တယောက်နဲ့ တယောက် အပြင်မှာ တခါမှ မတွေ့ဖူး မမြင်ဖူးကြသော်လည်း ချစ်စရာ မြန်မာလူမျိုးတွေပီပီ အလှူလို့ ကြားလိုက်ရင် စေတနာ သဒ္ဓါတရား ထက်သန်စွာနဲ့ ထည့်ဝင်လှူဒါန်းကြတဲ့ ရပ်နီး ရပ်ဝေးမှ အလှူရှင် ဘလော့ဂါ ညီအကို မောင်နှမများ နဲ့ စိတ်စေတနာချင်းရော ယုံကြည်ချက်ချင်းပါ ထပ်တူညီကြတဲ့ အွန်လိုင်းပေါ်က မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေ အားလုံးကို အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း ဝမ်းမြောက် ဝမ်းသာစွာနဲ့ မှတ်တမ်းတင်အပ်ပါတယ်…။
ဒါကတော့ ဒီနေ့ နိုဝင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့ မနက်မှာ ဆရာ အော်ပီကျယ်ဆီက ရောက်လာတဲ့ မေးလ်ပါ...။ စေတနာရှင် အလှူရှင်များ အားလုံး ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဖြစ်ကြစေဖို့ မျှဝေလိုက်ပါတယ်...။
စေတနာရှေ့ထားပြီး လှူဒါန်းကြတဲ့ အလှူရှင်များအားလုံး မိမိတို့ လိုရာဆန္ဒများ တလုံးတဝတည်း ပြည့်ဝကြပါစေ… နောက်နောင်ကိုလည်း အခုထက် ပိုတိုးပြီး လှူနိုင် တန်းနိုင်သူများ ဖြစ်ကြပါစေ… စိတ်ရော ကိုယ်ပါ ကျန်းမာ ချမ်းသာစွာနဲ့ လောကီ လောကုတ္တရာ နှစ်ဖြာသော အကျိုးကို သယ်ပိုးဆောင်ရွက်နိုင်သူများ ဖြစ်ကြပါစေလို့ အားလုံးရဲ့ကိုယ်စား ဆုတောင်းမေတ္တာ ပို့သအပ်ပါတယ်…။
Posted by သက်ဝေ at 5:00 PM
Vista November 2, 2011 at 5:19 PM
Anonymous November 2, 2011 at 5:20 PM
မမ သက်ဝေ တော်လိုက်တာ။ လှုတဲ့သူတွေ ရဲ့ ဘလော့လိပ်စာ နဲ့ နာမည်တွေကို အတိအကျ တွဲရက်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားထားရတယ်။ သိရသလောက် တစ်ချို့တွေဆို အိုင်ဘဏ့် မှာ အင်နစ်ရှယ် ကို အတိုကောက်လေးတွေ ပေးထားတာကိုလဲ နာမည် အပြည့်အစုံ နဲ့ ပြန်ဖော်ပြထားတယ်။ ကြိုးစားအားထုပ်မှုတွေ နဲ့ အပင်ပန်းခံရမှုတွေကို အသိအမှတ်မပြုပဲ မနေနိုင်ဘူးး) ၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Kay November 2, 2011 at 6:09 PM
စာရင်းမှာ ဘလော့လင့် တွေ ချိတ် ဖို့..အတော် ခေါင်းမူးတယ်.. ( သိဒယ်)း)
မြသွေးနီ November 2, 2011 at 6:40 PM
AaB ဆထက်တိုး အောင်မြင်ပါစေ အစ်မသက်ဝေ...။
မိုးငွေ့...... November 2, 2011 at 6:50 PM
ချစ်သော မမသက်ဝေ ဒီထက်ပိုပြီး ပိုပြီး.... လိုအင်ဆန္ဒပြည့်ပါစေ...း))
rose of sharon November 3, 2011 at 10:55 AM
မောင်ဘကြိုင် (ချဉ်ပေါင်ခြံ) November 3, 2011 at 11:35 PM
သာဓု သာဓု သာဓုဗျာာာ
mstint November 7, 2011 at 1:25 AM
သာဓု သာဓု သာဓု ခေါ်ဆိုသွားပါတယ် မသက်ရေ။
စေ့စေ့စပ်စပ် ဆောင်ရွက်နိုင်တာ ချီးကျူးပါတယ်။